“Uma imaanin Barcelona si aan ula dagaalamo kooxda Real Madrid”…Arturo Vidal – Gool FM
(Barcelona) 06 Agoosto 2018. Xidiga khadka dhexe xulka qaranka Chile ahna saxiixa cusub ee kooxda Barcelona Arturo Vidal ayaa sheegay inuusan dooneynin in uu la dagaalamo Real Madrid, kadib imaatinkiisa garoonka Cump Nou.
Xiriirka Arturo Vidal iyo kooxda Real Madrid ayaa la fahansan yahay inuusan fiicneen, sababa la xiriira in kooxdiisii hore ee Bayern Munich laga cirib tiray Champions League dhowr jiray oo hore ay wada ciyaareen Los Blancos.
Arturo Vidal ayaa shirkiisii jaraa’id ugu horeeyay ee kooxda Barcelona kadib markii uu saxiixay heshiiska kooxda reer Catallonia ku sheegay in ujeedka imaatinkiisa garoonka Cump Nou aysan ahayn inuu la dagaalamo Real Madrid.
“Waxaan doonayaa in kaliya aan ku guuleysto tartanka Champions League, ee ma doonayo inaan dagaal la galo kooxda Real Madrid”.
“Waxaan rajeynayaa inaan koobab ku guuleysan doono seddexda xilli ciyaareed ee soo aadan”.
Muxuu ka yiri halyayga reer Brazil Ronaldo wararka ku aadan in Luka Modrić uu ku biirayo kooxda Inter Milan?